Akwụkwọ kacha mma nke akwụkwọ ndị Africa | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ kacha mma nke akwụkwọ ndị Africa
Omenaala nke onu emeela ka ndi mmadu di iche iche gbasaa nkuzi di uku ma gosiputa isi ihe nke otu omenala n'oge o bula. N'ihe metụtara kọntinent dị ka Africa, agbụrụ dị iche iche mere nka a otu n'ime ụdị nkwukọrịta ha kachasị ruo mgbe mbata nke ịchị obodo na ịmanye nke ndị mba ọzọ katọrọ ọdịnala ha. Ọ dabara nke ọma, narị afọ iri ọhụrụ ekwela ka ndị na-ede akwụkwọ n'Africa nwee ike ikpughere ụwa ihe nketa nke kọntinent ka ọ mebiri dịka ọ jupụtara na akụkọ na uri. Chọrọ ịma akwukwo ndi ozo kachasi nma nke akwukwo Afrika?
1 Ihe niile dara, site na Chinua Achebe
2 Americanah, nke Chimamanda Ngozi Adichie dere
3 Akwụkwọ ozi m kachasị ogologo, si Mariama Bâ
4 Nsogbu, nke JM Coetzee dere
5 Otu ọka wit, sitere na Ngugi wa Thiong'o
6 Sleepwalking Earth, nke Mia Couto dere
7 Allah abụghị onye Ahmadou Kourouma
8 Ọkụ nke mmalite, site n'aka Emmanuel Dongala
Ihe niile dara, site na Chinua Achebe
Ọ bụrụ na e nwere akwụkwọ na-akọwa, dị ka ndị ọzọ ole na ole, nnukwu nsogbu ndị ọchịchị kpatara maka Africa, nke ahụ bụ Ihe niile na-ada. Ebube ọrụ nke Onye edemede Naijiria bụ Chinua Achebe, onye dika otutu ndi ozo no n’obodo ya bu ndi gbaliri igbalita mbu nke ndi Anglican na nari nke iri-abuo, akwukwo a nke edeputara n’afo 1958 na akuko Okonkwo, bu dike nke Umuofia, ndi bu akuko si n’ omenaala igbo nke ndi mbu izi ozioma. abata na ebumnuche nke ịgbanwe ụkpụrụ ma nyekwa ọhụụ ha nke eziokwu. Gwara dị ka akụkọ, ma dị mma iji mikpuo onwe gị n'okwu na ọdịbendị nke akụkụ a pụrụ iche nke Africa, Todo se dismorona bụ ihe a ga-agụ maka ndị niile chọrọ ịbanye n'ime akụkọ ihe mere eme nke kọntinent kasị ukwuu n'ụwa.
Americanah, nke Chimamanda Ngozi Adichie dere
Amerịka, nke ahụ bụ ihe ndị Naịjirịa kpọrọ onye mere njem site na mba ọdịda anyanwụ Afrịka wee rute Amerịka wee laghachi. Okwu nke anyi nwekwara ike izo aka na Chimamanda Ngozi Adichie, ikekwe onye edemede Africa kachasị emetụta taa. Ngozi maara banyere nwanyị na-agbachitere eze na ntu na mkparịta ụka ya, akụkọ ya, na mgbakọ ya, mere akwụkwọ akụkọ a nke kacha nwee ihe ịga nke ọma na United States site na ịkọ akụkọ banyere otu nwa agbọghọ na nsogbu ya ịga n'ihu mgbe ha kwagara n'akụkụ ọzọ ọdọ mmiri. E bipụtara na 2013, Americanah anatawo n'etiti ndị ọzọ onyinye nturu ugo nke National Book Circle, otu n'ime onyinye kasị mara amara na United States.
Akwụkwọ ozi m kachasị ogologo, si Mariama Bâ
N'adịghị ka mba ọdịda anyanwụ, ịlụ karịa otu nwanyị ka bụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe n'Africa. Omenala nke na-akatọ ụmụ nwanyị ka ndị di ha doo ha ma hụ ohere ha inwe ịga n'ihu ebe dị ka Senegal, obodo nke onye edere banyere eziokwu ya na akwukwo a Mariama Ba, onye edemede cheere ruo mgbe ọ gbara afọ iri ise na otu ka ọ gwa ya eziokwu. Ndị na-akwado akwụkwọ ozi m toro ogologo bụ ụmụ nwanyị abụọ: Aïssatou, onye kpebiri ịhapụ di ya ma kwaga mba ọzọ, na Ramatoulaye, n'agbanyeghị agbanyeghị na Senegal, malitere igosi mgbanwe nke ọnọdụ dabara na ifufe nke mgbanwe nke wetara nnwere onwe nke Obodo West Africa a na 1960.
Nsogbu, nke JM Coetzee dere
El apartheid na South Africa tara ahụhụ ruo 1994 Ọ bụ otu n'ime ihe ikpeazụ fọdụrụ nke ọchịchị nke na-etigbu Africa ruo ọtụtụ narị afọ. Otu n'ime ndị edemede kachasị mara nke ọma otu esi ejide eziokwu nke ihe ahụ merenụ na nsonaazụ ya bụ Coetzee, Nobel chọr'inwe na Akwụkwọ na na "Nsogbu a" na-egosi akụkọ na-adaba anyị n'ime omimi nke olulu juputara na nzuzo. Na-agbawa obi, akụkọ banyere prọfesọ kọleji David Lurie na mmekọrịta ya na nwa ya nwanyị bụ Lucy na-achọpụta njem site na nuanced, kwa ụbọchị South Africa nke ga-arafu ndị na-agụ akwụkwọ kachasị nwee obi ike.
Otu ọka wit, sitere na Ngugi wa Thiong'o
N'ịbụ nke akwụkwọ mbụ o meghere, bụ́ Bible, nwere n'ahụ ya. Onye edemede kacha mara amara nke Kenya E jidere ya na ọka wit, aha e si n’amaokwu nke akwụkwọ ozi mbụ na nke ndị Kọrịnt, akụkọ banyere ndị mmadụ na akụkọ ihe mere eme ha n’ime ụbọchị anọ buuru Uhuru ụzọ, aha ejiri mara ya. Nnwere onwe Kenya ruru na Disemba 12, 1963. E bipụtara ya na 1967, ọka ọka bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mma nke Thiong'o, tụrụ mkpọrọ n'oge ahụ kwalite ihe nkiri na asụsụ Kikuyu n'ime ime obodo nke obodo gị na otu n'ime Ebumnuche ebighi ebi maka Nrite Nobel na Akwụkwọ nke na-aga n'ihu na-eguzogide ya.
Sleepwalking Earth, nke Mia Couto dere
Were dị ka otu n'ime ndị kasị mma n'Africa akwụkwọ akụkọ mgbe, Leepwa Ihi ụra na-aghọ akụkọ ọjọọ banyere agha obodo na Mozambique nke 80s site na anya nwoke ochie Tuahir na nwata nwoke Muidinga, ihe odide abụọ zoro n'ime ụgbọ ala mebiri ebe ha chọtara akwụkwọ ndetu nke otu n'ime ndị njem ahụ dere ndụ ya. . Masterutoce nke Kouto, onye isi akwukwo na-achota akuko banyere otu mba Mozambique choputara na 1498 site na ndi Portuguese Basque nke Gama ma were taa dika nke kachasi mmepe n’ime uwa.
Allah abụghị onye Ahmadou Kourouma
Nwa amaala nke Ivory Coast, ọtụtụ ndị lere Kourouma anya asụsụ francophone nke Chinua Achebe. N'ịmara nsogbu nke ala ya na kọntinent ya, onye edemede ahụ, onye malitere ide ihe mgbe ọ dị afọ iri anọ, hapụrụ dị ka ihe atụ kachasị mma nke ọhụụ ya Allah abụghị iwu, ọrụ nke na-ewetara anyị akụkọ ihe mere eme nke Birahima, nwa mgbei zigara Liberia na Sierra Leone dị ka nwata agha. Otu n'ime akwụkwọ kachasị mma na akwụkwọ Africa mgbe a bịara n'ịbịakwute ụmụaka rụrụ arụ nke ọtụtụ puku ụmụaka eji mba abụọ ewere dị ka "ụlọ akwụna".
Ọkụ nke mmalite, site n'aka Emmanuel Dongala
Amụrụ na 1941 na Republic of the Congo, Emmanuel Dongala bụ onye edemede kachasị amachite nke ihe bụ otu n'ime mba ndị mba ọzọ kachasi ike. Ọkụ nke mmalite na-erubere ọtụtụ ajụjụ nke onye na-akwado akwụkwọ akụkọ a, Mandala Mankunku, n'ime narị afọ gara aga ịchị obodo, ọchịchị Marxist na nnwere onwe ya Ha wekọ ihe emere n'ubọchi emere nke mba ahu nwere nsogbu.
Kedu ihe bụ echiche gị akwụkwọ kachasị mma nke akwụkwọ Africa?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ kacha mma nke akwụkwọ ndị Africa
Rupi Kaur bụ nwanyị, uri na Instagram